Nsogbu gburugburu ebe obibi: ihe ha na-akpata | Green Renewables
Ụwa anyị na-eche ihu dị iche iche ihu mgbe nile nsogbu gburugburu ebe obibi. Ọtụtụ n'ime ha na-abịa site na iji ihe ndị sitere n'okike eme ihe n'ike n'ike n'ike nke na enweghị ike ịmaliteghachi ya n'otu ọsọ ahụ. Ihe ndị a niile na-agụnye mmebi nke gburugburu ebe obibi n'ihi mkparị nke ụmụ mmadụ. Nri mmadụ na-adabere n'ịnweta ngwaahịa karịrị ike nrụpụta anyị.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị banyere nsogbu gburugburu ebe obibi dị iche iche nke ụwa anyị na-eche ihu na ihe ọjọọ ha na-esi na ya pụta.
1 Nsogbu gburugburu ebe obibi
1.1 Mgbanwe ihu igwe na mmetọ ikuku
1.2 Mmiri acid na igbutu osisi
1.3 Mmebi ala na mmetọ
2 Nsogbu gburugburu ebe obibi na obodo mepere emepe
2.1 Ijikwa ihe mkpofu na enweghị ihe eji emegharị ihe
2.2 Ojiji nke plastik na akara gburugburu ebe obibi
3 Nsogbu gburugburu ebe obibi na ọkwa ndu
Mgbanwe ihu igwe na mmetọ ikuku
Ụwa na-eche mgbanwe ihu igwe ihu n'ihi na okpomọkụ na-arị elu na elu. na nke a na-eme ngwa ngwa n'ihi ọrụ mmadụ, ya bụ, anyị achụpụla ụmụ mmadụ na ụbara ikuku gas na-ekpo ọkụ.
Iche ya ihu na-achọ ntinye aka zuru ụwa ọnụ, nke mba niile ga-ebelata ikuku nke ikuku griin na ikuku. Maka nke a, ọ dị mkpa ịkụ nzọ na ume ọhụrụ, ụgbọ njem ọha na ụgbọ ala na-eji ike dị ọcha, ma nyefee iwu na-achịkwa ikuku sitere na ụlọ ọrụ.
Mmetọ ikuku, ya bụ, ọnụnọ nke mmetọ na ikuku, nwere ma ihe ebumpụta ụwa na nke mmadụ mere. Ihe kachasị na-ebute mmetọ ikuku bụ: Ngwuputa maka iji ngwaahịa kemịkal na ígwè ọrụ dị arọ dị mkpa maka mmepe ya, igbutu osisi, njem na-abawanye ụba nke metụtara ire ọkụ nke mmanụ ọkụ, ọkụ na iji ọgwụ nje eme ihe n'ọrụ ugbo.
Iji belata ya, enwere ike iwere ihe ndị dị ka ịkwalite ụgbọ njem ọha, iri mmanụ ọkụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, iwulite mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ karịa ma ọ bụ ibelata oriri iji belata ọgbọ mkpofu.
Mmiri acid na igbutu osisi
Mmiri acid bụ mmiri ozuzo nke mmiri na ihe mkpofu na-egbu egbu mejupụtara, ọkachasị acid sitere na ụgbọ ala, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụdị igwe ndị ọzọ. Iji gbochie nke a ime, ọ dị mkpa ijikwa ihe ndị na-emetọ ikuku, mechie ụlọ ọrụ ndị na-akwadoghị ma belata ọdịnaya sọlfọ nke mmanụ ụgbọala, ma ọ bụ kwalite na itinye ego na ume ọhụrụ.
FAO (Nri na Ọrụ Ugbo nke United Nations) na-ekpebi mba ndị dị na South America na Africa Ihe kacha emetụta ha bụ igbukpọ osisi n'ihi ọrụ ugbo na-adịghị adịgide adịgide na iji osisi eme ihe n'ụzọ gabigara ókè. Ọ bụ ezie na oke ọkụ nke ọhịa dị obere, ọ bụkwa ihe kpatara mfu nke ọtụtụ puku osisi n'akụkụ dị iche iche nke ụwa kwa afọ.
Mmebi ala na mmetọ
Mgbe ala na-emebi emebi, ọ na-efunahụ uru anụ ahụ na kemịkal ya, yabụ na ọ nweghịzi ike ịnye ọrụ dịka ọrụ ugbo ma ọ bụ ọrụ gburugburu ebe obibi. Ihe kpatara mmebi ala bụ ihe dị iche iche kpatara: igbu osisi kpụ ọkụ n'ọnụ, oke ọrụ ugbo, ịta nri nke ukwuu, ọkụ oke ọhịa, iwu akụrụngwa mmiri ma ọ bụ nrigbu.
Ihe ngwọta iji zere ma ọ bụ ibelata nsogbu a bụ imejuputa atumatu gburugburu ebe obibi na-achịkwa iji ala. Iji teknụzụ ọrụ ugbo na-emerụ ahụ (iji ọgwụ pesticides, pesticides na fatịlaịza ma ọ bụ nsị ma ọ bụ mmiri na-emerụ emerụ), mkpofu mkpofu n'obodo mepere emepe na-ekwesịghị ekwesị, ịrụ akụrụngwa, Ngwuputa ihe, ụlọ ọrụ, anụ ụlọ na nsị bụ ihe kachasị akpata. Mmetọ ala nkịtị.
Iji teknụzụ ọrụ ugbo na-emerụ ahụ (iji ọgwụ pesticides, pesticides na fatịlaịza ma ọ bụ nsị mmiri ma ọ bụ mmiri emetọọ), mkpofu mkpofu n'obodo mepere emepe na-ekwesịghị ekwesị, ịrụ akụrụngwa, Ngwuputa ihe, ụlọ ọrụ, anụ ụlọ na nsị bụ ihe na-ebutekarị ụdị mmetọ ala.
Enwere ike ibelata mmetọ a site na ngwọta dịka ezigbo nhazi obodo, imegharị ihe na ịghara ịtụfu ihe mkpofu na gburugburu ebe obibi, mmachi nke ebe a na-ekpocha ahịhịa n'ụzọ iwu na-akwadoghị na nhazi nhazi nke Ngwuputa ihe na njikwa mkpofu ụlọ ọrụ.
Nsogbu gburugburu ebe obibi na obodo mepere emepe
Ijikwa ihe mkpofu na enweghị ihe eji emegharị ihe
Ijuju oke na ụzọ ndụ nke ndị na-azụ ahịa na-eme ka mmụba nke mmepụta ihe mkpofu na, ya mere, mmụba nke nrigbu nke ihe ndị sitere n'okike na-eyi egwu site na njedebe. Iji gbochie nke a ime, ọ dị mkpa ịkụziri na mesie usoro akụ na ụba okirikiri ike site na mmemme dị ka mbelata, imegharị ma ọ bụ megharịa.
Ọ bụ ezie na n'ọtụtụ mba, karịsịa na mba ndị mepere emepe, ọ bụrụ na a na-arụ ọrụ mkpofu na enwere ụlọ ọrụ maka mkpochapụ ya. E nwekwara ọtụtụ mba ndị na-anaghị ejigharị ihe. Na mgbakwunye na mwepu nke ihe ọhụrụ sitere n'okike, enweghị ihe eji emegharị ihe na-ebute oke mkpofu n'ime ebe a na-ekpofu ahịhịa. N'ihe gbasara enweghị ihe eji emegharị ihe, ọ dị mkpa ịkwalite mmata na ịkụziri ụmụ amaala akwụkwọ, mana gọọmentị ga-etinyekwa onwe ya n'ọrụ ka e wee nweta ezigbo njikwa mkpofu.
Ojiji nke plastik na akara gburugburu ebe obibi
Ha eguzobela omenala ndị a na-atụfu ihe ma na-enye anyị ndụ dị mma karị, bụ nke a ma ama na ngwaahịa rọba. Oke osimiri kacha emetụta mmepụta rọba, n'ihi na ihe mkpofu a ga-emecha rute oke osimiri, na-emetụta ahụike nke ụdị mmiri na emesịa ahụ ike nke ụdị ụwa, gụnyere anyị. Ihe ngwọta kwesịrị ịbụ iji belata ojiji nke plastik ma chọta ụdị nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ na-enwe mmetụta na gburugburu ebe obibi.
Akara ebe obibi bụ ihe ngosi gburugburu ebe obibi, nke na-ezo aka na mmetụta mmadụ na gburugburu ebe obibi, na-egosi oke ókèala mmepụta ihe ha chọrọ iji mepụta ihe ndị a na-eji na-enweta ihe mkpofu na-emepụta. Nri na-enweghị isi na ijikọ ụwa ọnụ pụtara na akara gburugburu ụwa na nke onye ọ bụla na-abawanye.
Nsogbu gburugburu ebe obibi na ọkwa ndu
Usoro gburugburu ebe obibi emebiela n'ihi mgbanwe ndị o megoro, ma ọ bụ maka ọrụ ugbo, anụ ụlọ, mgbasawanye nke obodo mepere emepe, ịkụnye ụlọ ọrụ mmepụta ihe, imebiga ihe ókè nke gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ omume dị ka iwebata ụdị ndị na-abụghị ụmụ amaala, ịchụ nta iwu na-akwadoghị. Mmetọ na ihe omume ụmụ mmadụ ndị ọzọ bụ isi nsogbu gburugburu ebe obibi nke ọnwụ nke biodiversity. Iji chọta azịza ya, na mgbakwunye na ịkụziri ndị mmadụ ka ha kwanyere gburugburu ebe obibi ugwu, a ga-ejikwa iwu chebe oghere okike.
Enwere ahịa maka ụdị ndị a na-ere n'ụzọ iwu na-akwadoghị na-ejide ma na-azụta ihe dị ndụ site n'ala nna ha, na-emecha rute ebe ndị ọzọ a na-ewere ụdị ndị ahụ dị ka ọgbaghara. N'ihi asọmpi maka ókèala na nri, na mgbasa nke ọrịa ọhụrụ na mpaghara ahụ, ụdị ndị na-akpa ike nwere ike mechaa dochie ụdị ụmụ amaala.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere nsogbu gburugburu ebe obibi dị iche iche chere ụwa anyị ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nsogbu gburugburu ebe obibi